Nahazo ny asany voalohany ny robots amin'ny teknolojia Starship Technologies | Vaovao momba ny gadget
Ny robot mpanatitra Starship Technologies dia mametraka ny asany voalohany
Volana lasa izay dia fantatsika izany Starship Technologies nanomboka nanandrana ny robot-dry zareo izy ireo. Raha vantany vao nifarana io vanim-potoana io dia fantatsika fa farany ary taorian'ny nanehoany ny fahaizan'izy ireo dia toa efa manana ny asany voalohany amin'ny maha mpitantana sakafo azy ireo ho an'ny rojo DoorDash any Redwood City, Kalifornia.
Ho tsipiriany iray, lazao aminao momba ireo robot mahaleo tena mahafinaritra ireo dia vokatry ny orinasa noforonin'ireo mpanorina roa an'ny Skype. Anisan'ireo toetra mampiavaka an'ireto zavaboary ireto ny fanamarihana fa fiara mandeha amin'ny herinaratra tanteraka ity izay efa nampiana a rafitra mitondra fiara mizaka tena izay ahafahanao mivezivezy amin'ny sisin-dàlana misy tanàna a hafainganam-pandeha ambony indrindra 6 km / ora.
Robots Starship Technologies dia hanana ny asany voalohany.
Ho antsipirihany iray, araka ny noresahintsika tamin'izany fotoana izany, ny Starship Technologies dia nanao fitsapana pilotika ny robot-ny tany amin'ireo tanàna lehibe sy manan-danja iraisam-pirenena toa an'i Bern, Düsseldorf, Hamburg, London ... sns ary hatramin'ny 36 tanàna eropeana. Ho azy ireo, any Etazonia, ireo robot ireo dia notsapaina teny amin'ny araben'i Silicon Valley sy Washington. Taorian'ireo volana maro lasa ireo dia nanomboka ny fitsapana ny orinasa tamin'ny 2016, farany ny vokatrao dia hanomboka hiasa amin'ny tontolo tena izy.
Amin'izao fotoana izao, farafaharatsiny farafaharatsiny amin'ny fomba ofisialy, ny orinasa voalohany nanapa-kevitra ny hatoky ny vokatra Starship Technologies dia DoorDash izay nahazo tsy latsaky ny enina tamin'ireo robot mahaleo tena ireo ho tompon'andraikitra amin'ny fanaterana sakafo ao an-tanànan'i Redwood City. Ny fandefasana ataon'ity sokajin-fiara ity dia hahatratra ao anatin'ny 3,5 kilometatra, ivelan'io tariby io, dia hataon'olombelona hatrany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » teknolojia » Robotics » Ny robot mpanatitra Starship Technologies dia mametraka ny asany voalohany
Manuel Garcia Muñoz dia hoy izy:
Mandeha aho, tsy hitako fa azo atao mihintsy
Valiny tamin'i Manuel García Muñoz
Hampandre ny contact anao ho azy ny WhatsApp fa nanova ny nomeraon-telefaonanao ianao
Ny teknolojia LiFi dia efa avo 100 heny noho ny WiFi